Cuberdon ဥရောပအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးထင်ရှားတဲ့ဒေသခံသကြားလုံးတစျဦးဖွစျသညျ. ဒါဟာ Hat-ပုံဖြစ်ပါသည်, မကြာခဏခရမ်းရောင်, နှင့် Raspberry အဆာနှင့်ပြည့်စုံ. သင်တဦးတည်းသို့ကိုက်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့အံသွားလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဖြည့်သည့်အပျော့အလယ်သို့နစ်မြုပ်. သူတို့ကမကြာခဏဘယ်လ်ဂျီယံရဲ့လို့ခေါ်ပါ အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသောလျှို့ဝှက်ချက်. ဒါကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကထိန်းသိမ်းထားရန်ခက်ခဲသည်ဆိုသောကွောငျ့, သူတို့မကြာခဏတင်ပို့ကြဘူး. သို့သျောလညျး, ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားအိမ်မှာကရောက်စေဖို့လိုလားသူတစ်ဦးခရီးသွားဧည့်များအတွက်, အဆိုပါ cuberdon စုံလင်သည်.